Fanondranana ny hena : nomena fiofanana ny mpiompy any Boeny | NewsMada
Fanondranana ny hena : nomena fiofanana ny mpiompy any Boeny
Notanterahina tany Mahajanga ny 24 sy 25 febroary 2017 ny atrikasa ho fanatsarana ny fiompiana sy ny fanondranana ny henam-biby ary ho fanamafisana ny fahaiza-manao amin’ny fiarovana ny fahasalaman’ny biby. Nandray anjara tamin’izany ny foibem-paritry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny foibem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny fivondronan’ny mpanondrana harena an-dranomasina.
Nandritra io roa andro io, nampahalalana ireo mpizaika ny lalàna mifehy ny kalitaon-tsakafo, ny aretina mifindra mpahazo ny biby ary ireo aretina mpahazo ny biby ahina hifindra amin’ny olombelona. Vita iny atrikasa iny, hisy ny fizarana solosaina miisa 50 ho an’ireo mpizaika mba hanamorana ny asan’izy ireo eto anivon’ny faritra Boeny sy hahazoan’izy ireo tombontsoa amin’izany sehatry ny fiompiana biby sy fanondranana ny hena azo avy aminy izany.
Tonga nanatrika sy nanokatra ny fotoana ny solontenan’ny lehiben’ny faritra Boeny, ny Talem-paritry ny Varotra sy ny Fanjifana ary ny solontenan’ny Talem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana avy ao Boeny. Tompon’antoka nahatontosana izany ny tetikasa Santatra, izay mahazo famatsiam-bola avy amin’ny Vondrona Eoropeanina.
Natao ihany koa iny atrikasa hisarihana ny sain’ny tanora hitodika any amin’ny fambolena sy ny fiompiana manara-penitra. Misy hatrany ny mpanohana rehefa mivonona ho matihanina.